Yuusuf Dabageed “Maamul aanan aheyn Hirshabelle kama shaqeynaayo Hiiraan | Baydhabo Online
Yuusuf Dabageed “Maamul aanan aheyn Hirshabelle kama shaqeynaayo Hiiraan
Guddoomiyaha Gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar “Dabageed” oo markiisi hore mowqif adag ka taagnaa Shirkii lagu dhisay maamulka Hirshabelle, ayaa isbedel kadib markii uu sheegay inuu taagersan yahay Doorashadii ka dhacday Magaalada Jowhar.
Yuusuf Dabageed, waxa uu sheegay Doorashada ka dhacday Magaalada Jowhar inay tahay mid xalaal ah, islamarkaana wax fiican ay ka soo baxeen, isaga oo sheegay Maamulka Hirshabelle maamul aanan aheyn inuusan ka shaqeynayn Gobolka Hiiraan.
Waxa kale uu sheegay Maamulka Hirshabelle, maamul aanan aheyn inaan lagu garab dhisi karin, xilli Odayaasha Dhaqanka Gobolka Hiiraan ee Yuusuf Dabageed isku mowqifka ahaayeen ay wadaan qorshe ay ku dhisanayaan Maamul Hiiraan u gaar ah, inkastoo Yuusuf Dabageed uu bedelay mowqifkiisa.
“Jowhar wax fiican ayaa ka dhacay Doorasho Cadaalad ayaa ka dhacday Maamulkaas waqti dheer ayaa dhismihiisa soo jiitimaayay meesha kuma jirin Hiiraan iyo Shabellaha Dhexe la isku dari maayo, Ilaahey ayaa waqtigaan ka dhigay Waqtigeeda, si sharaf badan ayeey u dhacday, sidii Guddoonka Baarlamaanka iyo ku xigeenkiisa iyo Xildhibaanada loo doortay waad ogeydeen, waa guul u soo hooyatay reer Hiiraan iyo Shabellaha Dhexe, waxa dhimana waxaan leeyahay Allaha dhameystiro.”Ayuu yiri Dabageed.
Guddoomiyaha ayaa sidoo kale sheegay Maamul aanan aheyn Hirshabelle inuusan ka shaqeynayn Gobolka Hiiraan, isaga oo si dadban fariin ugu diray Odayaasha Dhaqanka reer Hiiraan ee ku howlan dhismaha Maamul iyaga u gaar ah.
“Maamul kale oo aanan aheyn Hirshabelle kama shaqeyn karo Deeganadan sababtoo ah maamulkaan ayaa la soo dhisay oo dadka ay ku wada qanacsan yihiin.” Ayuu yiri Yuusuf Dabageed oo la hadlay Risaala.
Intii ugu badneyn Ugaasyada Gobolka Hiiraan ayaa ka qaybgalay Shirkii lagu dhisay Maamulka Hirshabelle, iyadoo Ugaas Xasan kaliya uu weli taagan yahay mowqifka diidmada Maamulkaan.